Iintlobo-elekhtrons kwi Electric Skateboards - Jomo Technology Co., Ltd
Iintlobo-elekhtrons kwi Electric Skateboards
Xa nasiphi na isithuthi yombane, kukho iintlobo ezininzi ephambili braking- eliguqukayo, ukukhuhlana, kunye unyathela okungenisa. Bonke basebenzisa iindlela ezahlukeneyo abazimisele phantsi isithuthi.
neziqhoboshi ukukhuhlana na uhlobo olunye iziqhoboshi ezisetyenziswa ezimotweni eziqhelekileyo. Ngokusisiseko, ukukhuhlana kusisithintelo disc isetyenziselwa ukuguqula amandla ekinetiki (intshukumo isithuthi) ibe bubushushu, nto leyo ebizwa ngokuba yimetabolism isenokucotha isithuthi. A ibhayisekile indlela rhoqo usebenzisa ukukhuhlana isantya phantsi nokubotshwa iphedi brake nxamnye ungqameko engaphakathi yevili ibhayisekile yakhe.
skateboards zombane jikelele musa ukusebenzisa iziqhoboshi zochuku kuba ifuna hardware ngoomatshini ezisindayo ukuba unxiba ngaphandle.
Outrunner brushless motors- uhlobo luqhelekileyo esisetyenziswe kwi electric skateboards-eyinxalenye iseti iimagnethi esisigxina yajikeleza umphakathi sobhedu wire inxeba kwizangqa ukuze xa umsinga wombane iqhutywa uhamba ngocingo, oko kudala endle nosiba ugqithayo ku iseti ye umazibuthe abasisigxina, ebangela luvo ku gqiba nge. Le iingcingo ezibhijeleyo yenze electromagnet. Into cool malunga iimagnethi kukuba nomkhwezeli nga afumaneke ukuba ukuzitshintsha ring otsalayo ehlabathini ucingo lobhedu, oko sazisa ngoku ngumbane macingo. Le inqununu esisiseko emva zombini iinkqubo obuluqilima kunye okungenisa waqhekeza, nendlela umbane umbane.
elekhtrons Dynamic yinkqubo idla esetyenziswa yi zikaloliwe ngololiwe. Kule nkqubo, amandla agciniweyo aguqulwa abe bubushushu ngokuthi kudluliselwe umbane eyenziwe iinjini kukujikeleza ibe resistor, ngoko leyo uyakhululeka amandla njengoko ubushushu. Xa umazibuthe motor abamenza umoni ezikhoyo iingcingo zekopolo, uxhathiso is generated, sehlise kukujikeleza motor.
Ukususela namhlanje, kukho enye Rubber yombane esebenzisa elekhtrons onamandla kunye unyathela okungenisa.
skateboards zombane ngokuyintloko usebenzise inkqubo ebizwa ngokuba "elekhtrons okungenisa". Oku kuyafana ne-elekhtrons eliguqukayo, ngaphandle endaweni ukuthumela imbalelwano umbane ibe resistor uthothe amandla njengoko ubushushu, its kwakhona umva ibhetri, uyazihlaziya kuyo.
Umba ophambili kunye neenkqubo okungenisa kukuba xa ngaba ibhetri swi, aliyi kwamkela yangoku ngakumbi ngaphandle sithwalisa yaye zitshabalalise ibhetri. Ngenxa yoku, iibhodi ezisebenzisa kuphela elekhtrons okungenisa okunene uya kulahlekwa yiyo yonke ukukwazi yamtyumza emva ibhetri hits 100 kwentlawulo%.
IiBhodi ezifana iBhodi Koowheel okanye indenza iBhodi iya beep nje phambi kokuba iziqhoboshi ulisike, kodwa oku kudla akwanelanga ukuba abakhweli bangenamava uyikhuphile off ebhodini. Oku isizathu sokuba kubalulekile ukwazi kusoloko unyawo indlela magorha zonke ngesantya achankcathe Rubber yakho yombane kwi. I inzuzo enkulu kunye mellow Drive kukuba isebenzisa zombini braking- okungenisa kunye neguquguqukayo xa ibhetri ezipheleleyo (kunye neziqhoboshi kweplanga wayeza kunqanyulwa xa phandle ngokupheleleyo), oko itshintshela elekhtrons obuluqilima kwaye likuvumela ukuba isantya phantsi.
ixesha Post: Dec-14-2017